ZES : Fanantenana ho an’ny toekarena malagasy -
AccueilSongandinaZES : Fanantenana ho an’ny toekarena malagasy
ZES : Fanantenana ho an’ny toekarena malagasy
Tamin’ny tatitra farany nataon’ny FMI, dia nisongadina tamin’izany ny ahiahin’izy ireo fa tsy hitondra voka-tsoa mivelatra ho an’ny toekarena malagasy ilay lalàna vaovao mikasika ny ZES. Hatahoran’ny FMI hijanona amin’ny fampiasam-bola efa misy hatramin’izay fotsiny ny fampiharana io lalàna io. Namaly io ahiahin’ny FMI io ny teo anivon’ny M2PATE omaly. Nambaran’ny minisitra misahana ny M2PATE Benjamina Ramanantsoa fa vao mainka aza hanintona ireo mpampiasa vola vahiny sy ireo orinasa matanjaka atsy amin’ny Nosy Rahavavy iny lalàna vaovao momban’ny ZES iny. Satria tokoa dia namoraina ny lafin’ny ara-ketra. “ Fanantenana ho an’ny toekarena malagasy mihitsy izy io. Hampitsimbadika ny balance commerciale antsika mihitsy aza ny fisian’io ZES io, ka raha matiantoka isika hatramin’izay dia hanjary hahazo tombony betsaka. Vinaniana ho tonga 125 isan-jato ny fahombiazan’ny balance commerciale antsika noho ny fametrahana ny ZES”, raha ny fanazavana.
Tsy mahazo resaka araka izany ny FMI. Lafin-javatra tsy tokony hananany ahiahy no nametrahany fiahiahiana. Ny nahatonga izany mantsy, dia efa nahita tsy fahombiazana matetika tamin’ny tetikasa ZES tany amin’ny firenen-kafa izy. Ny tsy fantany anefa, dia môdelina ZES hafa mihitsy ity apetraka eto amintsika ity. Ny maha hafa azy dia natambatra amin’izany môdely izany avokoa ny traikefa nisy tany amin’ny firenena hafa nampiasa an’io ZES io, ka mora kokoa ny mijery ny lesoka sy ny tombontsoa. Manana ny toerana hametrahana ny fotodrafitrasa handraisana izany ZES izany koa isika toy ny seranam-piaramanidina efa nasiam-panitarana, ny seranan-tsambo hasiam-panitarana ao Toamasina sns…Tsiahivina fa hiteraka asa maro ho an’ny tanora ny ZES, ary hampiakatra avo ny toekarena.